"Man United Ayaa Leh Muhiimada Koowaad Haddii Ay Kooxo Dhawr Ah Doonayaan"- Mid Kamida Xiddigaha Ugu Fiican Yurub Oo Ay Iibkiisa Awood Ku Leeyihiin Red Devils. - Gool24.Net
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Lyon ee Juninho ayuu kasoo yeedhay hadal ay jeclaysteen jamaahiirta Manchester United kaddib markii uu sheegay in kooxdaasi ay muhiimada koowaad ku leedahay iibka xiddigeedii hore ee Memphis Depay.
Memphis ayaa sanado hoos u dhac badani uu galay xirfadiisa kusoo qaatay Old Trafford isagoo ugu dambayn u wareegay Lyon oo uu waayihiisa ciyaareed markale kor ugu soo qaaday.
Heshiiska uu haatan Depay kula joogo kooxda horyaalka Ligue 1 ayaa ah mid ku eeg ilaa sanadka 2021 balse waxa suurogal ah inuu suuqa January ka dhaqaaqo maadaama oo ay haatan booska 14-aad ku dhibtoonayso kooxdiisu.
Depay ayaan u muuqan mid muujinaya calaamadaha rabitaanka heshiis cusub waxaana macquul ah in kooxdiisu ay iska iibiso dhawaan halkii ay xagaaga xilli ciyaareedka dambe qaab xor ah ku waayi lahayd.
Juninho oo haatan ka warramaya fursada iibka 25 sano jirkan ayaa shaaca ka qaaday in ugu horreynba ay muhiimada koowaad leedahay Manchester maadaama oo ay qoddob dhigaya arrintaas markii hore kaga iibiyeen.
“Manchester United ayaa iska leh muhiimada koowaad haddii ay dhawr kooxood isku soo diyaariyaan inay isaga iibsadaan, Laakiin anagu wax dalabaad ah ilaa hada maanu helin, Isagu dhab ahaantii haatan Lyon ayuu ku faraxsan yahay”. Ayuu Juninho hadalkiisa ku furtay.
“Rudi (Garcia) si deg deg ah ayuu u samayn doonaa go’aan, Isagu waa hoggaamiye farsameed, Waxaanu ka wada hadli doonaa qandaraas kordhin dhammaadka sanadka”.